Amazwana Jikelele | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Ngena ngemvume or ubhalise ukuthi uthumele amazwana
Lapha lapho ungashiya khona imibono mayelana nale sayithi, izikebhe, amamori, ukudoba, nezinye izihloko, noma nje umane usho futhi usitshele ukuthi uvelaphi. Sicela, akukho zombangazwe, amahlaya, noma yini engafanelekile kule sayithi. Kumele Ngena ngemvume uma ufisa ukushiya amazwana.
Usungakwazi manje ukungena ngemvume nge-akhawunti yakho ye-Facebook.
Kuthunyelwe ngu- carson.orm NgoThu, 01 / 31 / 2019 - 18: 02
Inkinga yemoto (sicela ungisize ngiphume)
Ngakho ngathola i-1952 evinrude lightwin engizame ukuqala. Ngiye ngashintsha amafutha wegesi, ngihlanze i-tank fuel, ngihlanza ama-spark plugs, ngisusa i-carb, ngisusa isitsha futhi ngiphonsa i-crap out of the whole carb nge-carb cleaner, futhi ngithatha umhlangano ophansi futhi ngihlanze i-shaft futhi ipompo yamanzi. Ngiphinde ngiphinde ngibuyele ndawonye futhi ine-fuel flow. Ngiyifaka nge-drill futhi konke okwenzayo i-pop njalo njalo kanye nesikhashana kodwa akuqala nje. Ngifake ngakho akuyona inkinga kagesi. Ngifika nje ukuthi ngiqale. Ukuba ngu-15 kuphela enginakho okuhlangenwe nakho okuningi ngakho uma nonke ningangibonisa ngendlela efanele engingajabula ngayo. Siyabonga
Kuthunyelwe ngu- carson.orm NgoThu, 01 / 31 / 2019 - 18: 16
Ekuphenduleni Inkinga yemoto (sicela ungisize ngiphume) by carson.orm
Ibuye ibe nokucindezelwa okuhle ...
Kubuye kube nokucindezeleka okuhle futhi ngithengisa i-seafoam emakhanda ase-cylinder kanye nokugcoba kwayo manje
Kuthunyelwe ngu- carson.orm NgoThu, 01 / 31 / 2019 - 19: 20
Ekuphenduleni Ibuye ibe nokucindezelwa okuhle ... by carson.orm
Uvele uzame ukuqala ngemuva ...
Uvele wazama ukuqala ngemuva kwe-seafoam egijima ihora, ama-pops nokubhema okuningi. Akuqali
Kuthunyelwe ngu- rd58 NgoThu, 02 / 07 / 2019 - 13: 22
Ekuphenduleni Uvele uzame ukuqala ngemuva ... by carson.orm
Bona ukuphawula okungezansi
"Shintsha ama-plug wire"
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 02 / 08 / 2019 - 00: 24
Uma konke kulungile, kufanele kusebenze!
Ngisho ukuthi ngendlela ewusizo. Konke kudingeke ukuthi kube okulungile futhi azikho izinqamuleli. Ngisafunda lelo qiniso.
Ngithemba ukuthi ufunda nge-3.5 HP yokushisa kwe-Tune-Up-Inqubo. Futhi i-5.5 iyashisa okufanayo kodwa kokubili kufanele kufundwe ukuze kuzuze inzuzo egcwele.
Ngitshele ngamakhoyili, amaphuzu, ama-condensers, nama-plug wires. Kuyafaneleka kakhulu ukuthi izindleko zithathe zonke izindawo ngoba zihamba kabi ngenxa yobudala.
Futhi isikhathi sibalulekile. Kufanele kulungile. Unganikezeli. Uzofika lapho.
Kuthunyelwe ngu- keith_bores NgoThu, 03 / 28 / 2019 - 09: 31
Izimpawu zomzimba ezingaphansi
Noma ubani onezinombolo zezingxenye zezimpawu ezingaphansi kwe-55 QD-16 Angibonakali ukuthola ithuluzi elifanele noma kuphi.
Kuthunyelwe ngu- i-buzzsaw ku Fri, 04 / 12 / 2019 - 09: 38
Ekuphenduleni Izimpawu zomzimba ezingaphansi by keith_bores
izilinganiso ezincane ezisezingeni eliphansi
Nginayo i-1955 QD 16 futhi futhi kusukela kulokho engikufundayo yizingxenye eziphansi zezinhlamvu zifana nomnyaka ofanayo 18 hp njengoba amayunithi aphansi ashintshiwe ku-1958 ku-10 hp yi-18 hp kufanele ibe neziqinisekisi ezifanayo njenge-10 endala s.
Kuthunyelwe ngu- rd58 NgoThu, 02 / 07 / 2019 - 13: 20
Shintsha ama-ipulaki we-plug
Zama ukususa ama-plug waya phezulu. Uma bebuyile futhi konke okunye kwakungalungile, uzothola i-pop, bang, noma ibuyele emuva ngezikhathi ezithile njengoba uchaza. Nginenkinga efanayo lapho ngisanda kusebenza kwi-2cyl yangaphandle.
Ngiphinde ngingu-15 kodwa ngiye ngaphesheya kwesikhashana manje. Lona okuhlangenwe nakho kwami ​​futhi kukhona abantu abakukhona ngaphandle kwalokho, okungaphezu kwamasenti angu-2
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 02 / 08 / 2019 - 00: 27
Ekuphenduleni Shintsha ama-ipulaki we-plug by rd58
Kuthunyelwe ngu- I-AudreyTSheehan Ngo-Tue, 02 / 26 / 2019 - 11: 54
Kuthunyelwe ngu- i-oldarmydog NgoThu, 03 / 14 / 2019 - 23: 18
yikuphi ukucindezelwa okufanele kwe-1977 Johnson 25hp imodeli ayikho i-25R77H, futhi ingabe kukhona indlela engalungile nendlela engafanele yokufunda le nombolo kumhloli njengokuthi ngingaba kanjani izikhathi lapho ngijikeleza isilinda ngasinye?
Kuthunyelwe ngu- i-oldarmydog ku Fri, 03 / 15 / 2019 - 17: 33
Nginomfanekiso we-1977 Johnson 25 hp # 25R77H futhi ngidinga ukwazi ukuthi yini ukucindezelwa okuhle nge-cylinder ngayinye. Futhi uma umuntu engangitshela ukuthi yini ngaphandle kokuqala engikudingayo ukuguqula ukusuka ekudoneni kuqala kuya ku-elec ukuqala ukuguqula izingxenye ongeza kuzo ukwenza lokhu. Siyabonga nganoma yiluphi usizo engingathola. Ngilinga ukubuyisela isikebhe samasonto ethu asetshenziselwa i-kids camp camp, edingekayo esiteji esisha, Isikebhe yi-1970 Starcraft 14 'mariner deep v. Kuze kube kuhle kakhulu ukuba ngibuyele phansi ngasekupheleni kwesonto elizayo bese ngiqala in on the motor. Sibuye futhi sibonge nganoma yiluphi ulwazi.
Kuthunyelwe ngu- keith_bores Ngo-Wed, 03 / 27 / 2019 - 23: 22
1955 QD-16 Usizo !!!
Sawubona, ngisanda kuthenga lezi johnson seahorse 10hps ngoba mina futhi ngithandeka nabo futhi ngilokhu ngilinga ukuthola njalo uphawu lwezinti noma izinombolo zezimpawu ezihlanganisweni zami ezingaphansi kweJohnsons. Ngithenge izigxivizo eziningana ku-inthanethi futhi zihlale zingalungile.Iziqu ezimbili engiziphethe ngazo izinhlamvu ze-spaghetti kanye ne-2 o izindandatho (enye ye-shaft shift kanye neyodwa yomshicileli wesithwathwa ngokuthwala kuyo). Futhi ingabe kukhona inombolo yenxenye yesikhwama sebhesi esithinta ukushintsha o ring? Omunye umuntu kumele azi futhi akwazi ukungikhomba endleleni efanele. Noma yimuphi usizo uyakwazisa kakhulu. Futhi uzizwe ukhululekile ukungithumelela i-imeyili bores.keith@yahoo.com
Ngiyakuthanda lokho okushiwo le sayithi. Izingxenye eziningi zizoba ngaphezulu.
Kuthunyelwe ngu- uJohnhimm Ku-Mon, 04 / 08 / 2019 - 11: 51
Imoto igxuma ngaphandle
Ngine-Evinrude Fisherman 5.5, imodeli ye-5523. Uphinde wakha kabusha i-carburetor ngaphambi konyaka odlule. Ukuhamba kahle kakhulu ehlobo, kodwa ekugcineni kwaqala ukuba nenkinga efanayo engangiyicabanga ukuthi ngiyilungisile. Lapho uhamba ngemoto eya emgodini injini izoqala ukugubha phansi futhi igwebe, ngaphandle uma ngidonsela kancane kancane. I-OK i-OK, kodwa idinga ukugoba kancane ukuvota ukugijima ku-throttle ephakeme. Iziphakamiso?
Kuthunyelwe ngu- bettyfoster Ngo-Sat, 05 / 18 / 2019 - 21: 29
U-Evinrude Lightwin (1955)
Ngangizibuza ukuthi i-manual (1952 - 1953) iyatholakala yini ifomu eliphrinta njenge PDF?
Ingabe kukhona umehluko omkhulu phakathi kwe-1955 nale ncwadi?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 05 / 22 / 2019 - 14: 23
Ekuphenduleni U-Evinrude Lightwin (1955) by bettyfoster
Bathengisa nge-eBay ...
Bathengisa nge-eBay (Chofoza lapha). Ngikubone ku-PDF ku-Facebook. Uma ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngithumele isixhumanisi lapha.
Kuthunyelwe ngu- jbanks2655 Ngo-Tue, 05 / 28 / 2019 - 19: 31
I-1966 Johnson 40hp
Ngine injini engaphansi futhi ngidinga i-unit ephansi nazo zonke izimpawu uzobe nazo lezi zinto. Isibonelo # RDSL - 28B.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 06 / 04 / 2019 - 17: 28
Ekuphenduleni I-1966 Johnson 40hp by jbanks2655
Nasi uhlu lwezingxenye imoto yakho Kufaka phakathi I-18-2686 I-Lower Unit Seal Kit.
Sithengisa okuningi kats kits seal ngalesi sikhathi ku-Amazon nase-eBay. Ngenkathi usuhlukanisile, kuyisikhathi esihle sokuhlola umkhumbi.
Inhlanhla ngephrojekthi yakho, futhi sicela uhlale usithumele. Singathanda ukubona ezinye izithombe!
Kuthunyelwe ngu- ted6 Ku-Mon, 06 / 03 / 2019 - 11: 23
UJohnson 4B69B we-cylinder amabili
ngifuna usizo oluthize sicela. Yiba ngenhla futhi udinga i-coil / amakhoyili kanye nokuholela kuyo.
Ukhona owaziyo ukuthi ngingatholaphi lezi noma ngiyazi izinombolo zezingxenye zabo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 06 / 04 / 2019 - 17: 19
Ekuphenduleni UJohnson 4B69B we-cylinder amabili by ted6
Sawubona futhi wamukelekile! I-Johnson 4B69B yakho yilokho thina e-USA esinakho njenge-model 4R69, noma i-1969 4-HP. I-motor encane encane. Noma kunjalo, nansi isixhumanisi ukukusiza uthole zonke izingxenye, kuhlanganise namakhoyili. Zonke izingxenye ozodinga ziyatholakala kakhulu kunoma yimuphi umthengisi wemikhumbi, noma usebenzise ama-Amazon ne-eBay links.
Johnson 4B69B 4R69 (Chofoza Lapha)
Angiwuboni umehluko phakathi kwezinguquko zaseMelika nase-UK. Kuze kube yiziphequluli nokushaya indiza, lokhu kuyisimiso esifanayo sokuthunjwa esisetshenziswa kuwo wonke ama-motor e-Evinrude / Johnson walowo nyaka. Ungathanda ukubuyekezwa kokubili amaphrojekthi angu-3 HP kanye ne-5.5 HP lapho ngilula khona ukushisa okufana ne-motor yakho.
I-3 HP Ukuguquka
I-5.5 HP Ukuguquka
Konke okunye mayelana ne-motor yakho nemiklamo yami kuyasondela ngokufana ncamashi futhi kungatholakala ngaphansi kwemenyu ye-PROJECTS ngenhla.
Inhlanhla futhi sicela usithumelele kuphrojekthi yakho.
Kuthunyelwe ngu- dtkelly Ngo-Wed, 07 / 24 / 2019 - 08: 35
Unenkinga yokuqalisa i-1980 yami Johnson 70 hp. Ibhethri elisha nomqali omusha. Bewujikisa futhi manje awenzi ngisho lokho. Ukuchofoza nje. Ibhethri elisha alishayi mkhuba kakhulu lapho ngixhuma ibhethri. Iziphakamiso ??
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 07 / 25 / 2019 - 19: 54
Ekuphenduleni Ukuqala izinkinga by dtkelly
Kungenzeka kube umqali…
Kungenzeka kube yi-Starter solenoid?
Nalu uhlu lwezingxenye zemoto yakho
Kuthunyelwe ngu- Lennyleisure3 Ngo-Wed, 07 / 31 / 2019 - 11: 38
zama ukuthatha ibhethri esitolo sezingxenye zovavanyo lomthwalo, bese uhlola
thola ukuhlolwa komthwalo webhethri endaweni yezimoto zasendaweni efana ne-auto auto noma i-auto zone bese uthatha indawo ye-solenoid uqinisekise ukuthi uthola i-marine solenoid 12vdc.
Kuthunyelwe ngu- Lennyleisure3 Ngo-Wed, 07 / 31 / 2019 - 11: 33
kuguqulwa uhlelo lwe-10hp johnson Outboard fuel
Ngibonga kakhulu ngemininingwane yokuguqula i-10hp johnson yami endala ye-petrol system ephuma engxenyeni ye-duel ecindezelwayo iye kolayini olulodwa ngokufaka iphampu kaphethiloli, usizo olukhulu.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 07 / 31 / 2019 - 12: 15
Ekuphenduleni kuguqulwa uhlelo lwe-10hp johnson Outboard fuel by Lennyleisure3
Ngiyazi inqwaba yabantu emhlabeni jikelele bangazazisa ezinye izithombe futhi babhale ngazo. Mhlawumbe isizinda esincane sokuthi utholakala kuphi nokuthi uyisebenzisa kanjani imoto. Uyini umfuziselo we-10 HP yakho? Akunasidingo sokubhala okuningi, kepha kungaba ukwengeza okuhle kulesi siza, futhi kuzokwaziswa. Ngiyabonga, Tom.
Kuthunyelwe ngu- I-ArTam2019 Ku-Mon, 08 / 12 / 2019 - 03: 51
Ibhuku lezincwadi zabanikazi be-Evinrude Lightwin 3HP kanye nezingxenye
Sawubona, ngiqala nje ngephrojekthi yokuvuselela i-3HP Lightwin. Kungenzeka yini ukulanda uhlu lwabanikazi kanye nezingxenye zezingxenye. Uma ngiya kuma-Projects-> Evinrude 3HP Lightwin-> Incwadi Yabanikazi (noma uhlu lwezingxenye), asikho isixhumanisi sokulanda ..
Kuthunyelwe ngu- hal5778 Ngo-Sat, 08 / 17 / 2019 - 19: 56
Sawubona ngine-1956 Johnson 15hp futhi ngangizibuza ukuthi ngabe othile anganikeza imininingwane efanele yokwakhiwa kwe-carb kit. Ngihlela nokuthi ngiguqule amakhoyili nepompo yamanzi ukuze ngikwazi ukuthola indlela efanelekile yalezi zinto futhi le bekuyimoto kababa bami futhi ibilokhu ihlale cishe ama-30yrs futhi NGIZOBUYELA ngakho njalo lapho ngiyikhipha ichibi ucezu lobaba luzobe lusebenza. Angisiye umakhenikha kepha ngizofunda le moto ngakho-ke lindela okungaphezulu kimi ngokuzayo ngijabule kakhulu ukuthi ngithole lo mbono !!!!!
Ngifune nokwazi imicabango yakho ngokuguqula isistimu yamafutha okucindezela ibe uhlelo olusha lwe-1?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 08 / 18 / 2019 - 00: 05
Ekuphenduleni Carburetor by hal5778
I-1956 Johnson 15 HP
Sawubona. Nansi into efanayo ku-Evinrude. Zonke izingxenye ziyafana:
Kuzwakala sengathi une moto enhle lapho uyilungisa.
Kuthunyelwe ngu- hal5778 Ku-Sun, 08 / 18 / 2019 - 09: 05
Ekuphenduleni I-1956 Johnson 15 HP by ttravis
I-56 Johnson 15hp
Ngiyabonga Tom ngizokwazisa ukuthi kwenzeka kanjani. Ingabe uneminye imicabango yokuguqula ukunikezwa kwamafutha kusuka ku-Pressurised kuya ohlelweni lwesimanje lwe-1 line?
Kuthunyelwe ngu- hal5778 Ngo-Sat, 08 / 24 / 2019 - 17: 55
Ngine-56 15hp Johnson engihlambe ngayo i-carb (amaphethiloli amasha, iflothi nenaliti nesihlalo) Ngisuse okutholile ngabuye kwahlanza umhlanga zahlanza zonke izingxenye ngabuye ngahlanganiswa ngamalokhethi amasha, ngenza isivivinyo sokucindezela futhi womabili amasilinda ase95lbs. Udaba enginalo ngalo luthi ngeke luqale uma ngikhipha igumbi lokungena komoya ngifafaze uphethiloli ku-carb kuzoqala nokuhlala kugijima. Ngibheke ukutholakala kwamafutha futhi lapho ngisebenzisa i-primer esethangini igcwalisa isitsha sokuhlunga ingilazi. Kungenzeka yini ukuthi uphethiloli awutholi kusuka endishini yokuhlunga uye endaweni yokugcina amanzi? Futhi lapho ngihlakaza i-carb ngangebanga ukunaka lapho kulungiswa khona okawoyela ophansi futhi ophakeme. Ingabe kunephuzu lokuqala okufanele lisetshenziswe maqondana nokuthi kufanele lisetshenziswe kanjani noma liphume kanjani bese lilungiswa okokugcina ngemuva kokuqala imoto engiyenzile kwakuyindlela yabo bobabili bese befaka imimese yokulungisa lapho kulungiselelwa khona futhi ukuzama ukuqala Ngibe nokulungiswa okuyize ku-6 oclock nokuphakama ku-12 oclock? Ngiyethemba ukuthi uma senginikezwe imininingwane engaka kuyadida noma ngubani kodwa ngacabanga ukuthi konke kuzoba wusizo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 08 / 26 / 2019 - 11: 33
Ekuphenduleni AKUKHO FUEL by hal5778
Ngikhempa kuleli sonto futhi ngizama ukuphendula nge-inthanethi elinganiselwe. Ngingaphendula kangcono ngesonto elizayo. Ngikholelwa ukuthi uqala ukulungiswa okuphakeme futhi okuphansi kwe-1.5. Musa ngaphezulu kokuqina. Kuzwakala sengathi umoya uyavuza ngebhasikidi. Lokhu kunomphumela ofanayo notshani onomgodi wepini. Bamba isandla udonse futhi udonse ukuqala kwezintambo ukuze uhlole i-vacuum. Ngizobuya ngesonto elizayo.
Ikhasi lokuqala «Okokuqala
Ikhasi langaphambilini <Previous
Ikhasi lamanje 3
Sicela uchofoze ku- EBay or Amazon isixhumanisi ngenhla ukusisiza. Sithola ikhomishana ye-4% noma ngaphezulu kukho konke okuthengayo kusuka ku-eBay noma i-Amazon.com kumahora alandelayo we-24. Loluhlelo lokubambisana oluzobambisana luzosiza ekuxhaseni amaphrojekthi, i-hosting, izilimi, ukuphepha kwe-SSL, nokuthuthukiswa kwesayithi ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe. Ukwesekwa kwakho kuyakwazisa kakhulu. (Isixhumanisi se-eBay sisha. Sizobona uma empeleni isebenza.)
Ngiyajabula ukuthi ubu…
Kusuka kuphrojekthi yami ye-5.5 HP:…
Ngicabanga ukuthi kunjalo ngo…
Ukuhlikihla isibambo kwe-Armature
Uma omunye umuntu enakho okufanayo…
donsa ukuqala ukuhambisa armature ipuleti isibambo
Umbuzo ngezintambo ze-spark.
Sicela uchofoze izixhumanisi ezingenhla ngaphambi kokuthenga Amazon or EBay. Abathengi Bezizwe Bayamukelekile
Ikhathalogi ye-2019 Michigan Wheel Propeller
I-2019 Sierra Marine Catalogue
Umnikazi wale sayithi ilungu eliziqhenyayo I-AOMCI.ORG
I-18-5225 Spark Plug Wire Wire
I-061001 Michigan Aluminium Prop 13-3 / 4 x 15 (13-3 / 4 x 15) 4-Stroke
I-061002 Michigan Aluminium Prop (13-1 / 4 x 17) 4-Stroke
I-061003 Michigan Aluminium Prop (13 x 19) 4-Stroke
I-061004 Michigan Aluminium Prop 13 x 21 (13 x 21) 4-Stroke
I-335533 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-1 / 8 x 21) 4-Stroke
I-335532 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-3 / 8 x 19) 4-Stroke
I-335531 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-1 / 2 x 17) 4-Stroke
I-335530 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-5 / 8 x 15) 4-Stroke
I-063045 Michigan Rapture Stainless Prop (13 1 / 4 x 21) 4-Stroke
I-063044 Michigan Rapture Stainless Prop (13-1 / 4 x 19) 4-Stroke
I-063043 Michigan Raptor Stainless Prop (13-1 / 4 x 17) 4-Stroke
I-063042 Michigan Ukuhlwithwa Okungenayo Okungaxhunyiwe 13-3 / 4 x 15
I-60-70 HP i-Aluminium ne-Stainless Props (i-4-Stroke)
I-45- 75 HP Izibani Zensimbi Engagqwali ((iGearcel enkulu neTru-Hub Exhaust)
I-40-75 HP Aluminium Props Large (4-1 / 4 ") IGearcel and Thru-Hub Exhaust
I-953424 Michigan Ballistic High-Performance Stainless Prop (13-1 / 2 x 24), I-Thru-Hub Exhaust
I-953422 Michigan Ballistic High-Performance Stainless Prop (13-1 / 2 x 22), I-Thru-Hub Exhaust
I-85 - I-140 HP Propellers yensimbi engenasici ye-V-4 Gearcase (13 Spline and Thru-Hub Exhaust)
I-763951 Evinrude Johnson BRP engenasici Prop (13-1 / 4 x 17) 13-Spline, Thru-Hub Exhaust